6 Tanjona lehibe ho an'ny Lohataona Spring
Toerana enina ambolena amin'ity lohataona ity
Ny fitobiam-be lohataona dia fomba lehibe ahafahana miverina any ivelany aorian'ny ririnina lava. Kraig Becker
Aorian'ny ririnina lava, ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra ahafahanao miverina any ivelany dia ny mandeha an-tongotra mandritra ny lasy. Saingy, raha mbola tsy vonona ny tobim-pialam-bolinao, na mitady karoka vaovao fotsiny ianao, dia manana toerana enina izay tonga lafatra amin'ny fandosiran'ny lohataona.
Park State Enchanted Rock ao amin'ny Texas Hill Country. Texas Parks sy Wildlife
Ny camping amin'ny hafanana amin'ny fahavaratra any Texas dia tsy mahafa-po foana, fa mandritra ny lohataona dia mbola fomba tsara hifandraisana indray amin'ny natiora. Iray amin'ireo toerana tsara indrindra hialana amin'ny alina ny fialan-tsasatra ao amin'ny State Park Enchanted Rock, any an-tranon'ilay iray amin'ireo lehibe bitolita lehibe indrindra manerana an'i Etazonia. Ny valan-javaboary dia mendrika ny hitsidika ny fomba fijery avy eny an-tampony ary misy làlana mahafinaritra mivezivezy manodidina ny manodidina manome dome. Fa mitsangatsangana any amin'ny toeram-pivarotana ary tsy ho afa-mandositra ny vahoaka fotsiny ianao, fa hahita ihany koa ny toerana lavitra sy lavitra. Any no hanananao fahafahana hiaina ny Texas Hill Country amin'ny voninahiny rehetra sy ny torimaso eo ambanin'ny lanitra be feno kintana.
Andeha hojerentsika, ny Valan-javaboarin'i Yosemite dia toerana goavana isan-taona, saingy misy antony roa mahatonga azy ho tena mahafinaritra indrindra amin'ny lohataona. Ho an'ny fiantombohany, ny vahoaka marobe tonga ao amin'ny valan-tseranana mandritra ny fahavaratra dia tsy manomboka mihodina fotsiny, noho izany dia matetika ireo fandriam-bahiny dia milamina sy mangina. Ankoatra izany, ny ranomafana ny lohataona dia mahatonga ny ranomamy malaza Yosemite hikoriana amin'ny ampahany betsaka, ka mahatonga azy ireny ho mendri-piderana kokoa noho ny mandritra ny taona sisa. Tahaka izany raha tsy ampy izany, raha ny hazo alikakely no mamelatra ny Lohasahan'i Yosemite dia hahita ny tena marina.
Oana Mamela Heloka Mahafinaritra (Colorado)
Crested Butte, Colorado dia trano fonenan'ny Oh Be Joyful Campground. Kraig Becker
Aorian'ny ririnina lava, ny lohataona mafana dia mitondra fiainana vaovao mankany amin'ireo tendrombohitr'i Colorado, izay manana toerana mahagaga maro miparitaka manerana ny fanjakana. Ny iray amin'ireo tsara indrindra anefa dia ny Camp O Be Beautiful izay mipetraka ivelan'ny Crested Butte. Mipetraka eo akaikin'ny Renirano Slate ilay tranokala ary manintona ny fomba fijery mahatalanjona, tsy lazaina intsony ny fanjonoana goavana, ary ny fanandramana mahafinaritra. Amin'ny volana fahavaratra dia ity no toerana tena mahafinaritra ho an'ny mponina sy ny mpitsidika, saingy amin'ny lohataona dia mangina sy milamina izy io. Aoka ho azonao antoka fa hitondra kitapo matory tsara ianao, satria ny alina alina any Colorado dia mbola hafahafa kely.
Tendrombohitra goavambe lehibe (Tennessee)
Sary avy amin'i Cecil Holmes / Getty Images
Trano fonenana maherin'ny 1500 isan-karazany, ny Tranoben'ny Tendrombohitra Great Smoke dia toerana mahafinaritra ho amin'ny lohataona, raha maro amin'ireo karazan-karazan-tsavony ireo no maniry ao anaty voninkazo feno. Ny valanjavaboary dia miaina miaraka amin'ny loko sy ny fofona manitra rehefa tonga ny hafanana ambony kokoa. Amin'ny fomba nentim-paharazana, ity no valan-tseranana nasionaly indrindra any Etazonia, ary amin'ny fahavaratra dia mety ho feno olona indraindray na dia eo aza ny habeny. Nefa mandritra ny lohataona dia mbola mangina fotsiny izy ary mora mora ny toeram-ponenana. Mandeha mialoha ny volana Jona anefa, toy ny tamin'ny fotoana maro ny voninkazo dia nandia ny taona indray.
Valley Valley National Park any Kalifornia)
Ny fambolena marevaka tanteraka amin'ny valan-javaboahary Death Valley. National Park Service
Ny Valley Valley National Park dia toerana iray hafa izay tsy sahy mitazam-potsiny mandritra ny fahavaratra, raha toa ka mihoatra ny 100 degrees Fahrenheit ny mari-pana. Fa mandritra ny lohataona dia mahafinaritra ery any, manolotra fialantsasatra tsara avy amin'ny ririnina amin'ny ririnina. Ny zaridaina dia tsy dia mahafa-po loatra, na dia mandritra ny faran'ny fizaran-tany aza, izay midika fa ny onja dia be dia be nandritra ny ankamaroan'ny taona. Raha toa ianao ka any amin'ny Valley Death mandritra ny oram-batravatra amin'ny lohataona, dia mety ho tsara vintana ianao amin'ny fanandramana ny voninkazo feno voromailala "super-bloom", izay ahafahan'ny zavamaniry an'arivony maniry eny amin'ny tany, mamorona ranomaso maromaro manerana ny tontolo. Fahitana mahatalanjona ny mahita, na dia mandalo ihany aza. Ny voninkazo marevaka dia tsy maharitra ela be amin'ny hafanana mahery hita ao amin'ilay valan-javaboary.
Toeram-pivarotana varahina (New Mexico)
Any akaikin'i Santa Fe, any amin'ny 9000 metatra ambonin'ny haavony, ny toeram-piantsonan'ny Iron Gate dia napetraka eo anelanelan'ny aspen sy ny hazo pine, ka mahatonga azy io ho toerana fialokalofana hametrahana toby. Izy io dia toy ny vavahady mankany Pecos Wilderness, izay toerana tsara indrindra ho an'ny fitsangantsanganana sy fiakanjo mitaingin-tsoavaly. Na ny efitra sy ny toeram-ponenana dia miaina miaraka amin'ny voninkazodia mandritra ny lohataona, ary manampy amin'ny hatsarana tsara tarehin'ilay toerana, izay ampitaina amin'ny faran'ny andro miaraka amin'ny tampon'ny lanitra.
Mankalaza ny faha 100 taonan'ny Sampan-jaza nasionaly
Trano fitsangatsangana lakana roa sy toeram-ponenana, West Plains, Missouri
Fikarohana mpikaroka RV alohan'ny hividiananao
Top Destinations for a Getaway Camping
Nahatsiaro ve ianao?
Inona no tokony hatao ao Bakersfield Californie
Station Station Hartford: Mila inona ny mpandeha sy ny mpandeha?
Annual Zilker ABC Kite Festival ao Austin
Ahoana ny fitsidihana an'i Hurghada, tanàna mena malaza any Ejipta
Mahatsiaro ny fijanonan'ny bus Londres
Ny toerana tsara indrindra any Malmo, any Soeda
Toerana tsara indrindra hividianana sôkôla ao Albuquerque
Torolàlana ho an'ny mpizaha tany National Park Bandhavgarh
Oktoberfest any Etazonia
10 Zavatra Tsy Azonao Ampidirina Amina Seza Sisalin-tsaina
Ahoana ny handehanana any Saint Jean Pied de Port